बेस्सरी हाँस्दा महिलाको बंगारा फुस्कियो ! - Ujyaalo TImes - Same Vision, Different Angles
बेस्सरी हाँस्दा महिलाको बंगारा फुस्कियो !
एजेन्सी । स्वास्थ्यका लागि हाँस्नु निकै आवश्यक छ तर एउटा निकै अचम्मको घटना सार्वजनिक भएको छ । एक महिला बेस्सरी हाँस्दा उनको बंगारा फुस्किएको छ जसका कारण उनले मुख बन्द गर्न सकिनन् । अन्त्यमा उनले डाक्टरको सहयोगमा समस्या सुल्झाएकी छिन् ।
तर महिलाको भाग्य, त्यहाँ डाक्टर पनि उपस्थित थिए । ल्याडबाइबलको रिपोर्ट अनुसार लिवान हस्पिटलका डाक्टर लुओ वेन्सेङ्ग रेलवे चिकित्सा इमर्जेन्सीको अपिलपश्चात् उनी महिला भएठाउँ पुगेका थिए । ‘म दौडिएर महिला भएठाउँ पुगेँ, उनी बोल्न सकिरहेकी थिइनन् र मुख बन्द पनि गर्न सकिरहेकी थिइनन्, डा। वेन्सेङ्गले भने ।
उनी र्‍याल काढिरहेकी थिइन् त्यसकारण उनलाई स्ट्रोक भएको ठानेँ । तर मैले उनको रक्तचाप लिए र उनलाई केही प्रश्न गरेँ त्यसपछि मात्रै उनको बंगारा डिस्लोकेट भएको थाहा पाएँ, उनको भनाई उद्धृत गर्दै ल्याडबाइबलले भन्यो । नाम नखुलाइएकी ती यात्रीले उनको यसअघि पनि गर्भावस्थामा बान्ता गर्दा बंगारा डिस्लोकेट भएको जानकारी दिएकी छिन् ।